R/wasaaraha Australia Julia Gillard oo kabaheeda ka carartay markii ay soo weerareen dad diidana. - iftineducation.com
iftineducation.com – R/wasaaraha dalka Australia Julia Gillard ayaa isku dhejisey mid kamid ah ilaaladeeda, si ay ugaga badbaado koox banaanbaxayaal ah oo dadkii loogu yimid dalka Australia ah magaalada Canberra.
Booliska ilaalada u ah iyo booliska ka hortaga banaanbaxayaasha ayaa isku gadaamay oo gabaad siiyey haweeneyda R/wasaaraha ka ah Australia markii lagala soo cararay xaflad ay ka qeybgalaysay maalinta Australia iyadoo hadiyado la bixinayay.
Miss Gillard ayaa turaanturootay kadibna mid kamid ah kabaheeda ayaa ka luntay hase ahaatee mid kamid ah ilaaladeeda ayaa qabtay oo saaray baabuur sugayay.
Dadka banaanbaxayaasha ah ayaa waxa ay ahaayeen kuwo ka soo horjeeday oo doonayay hogaamiyihii mucaaradka dalka Australia Tonu Abbott kaasoo ay dad gaaraya labo boqol oo kamid ah dad banaanbaxayay ay albaabada iyo daaqadaha u soo garaaceen iyagoo ku qeylinaya ereyo ka dhan ah dowlada.
Dadkan banaanbaxayay ayaa waxaa ay diidanaayeen hadal ka soo yeeray hogaamiyaha mucaaradka Mr Abbott oo uu ku sheegay in la burburinayo dhismooyin teendho ah oo ay dhisteen dadka loo yaqaan Aboriginalka.
Teendhadan ayaa waxaa ay ku taalaa barxada baarlamaanka Australia iyadoo dadka banaanbaxayana ay ku doonayaan xornimada dadka aboriginalka loo yaqaan iyo xaqa ay dhulka u leeyihiin.
Boolis badan ayaa loo yeeray si ay u badbaadiyaan R/wasaraha Australia.Hase yeeshee dadka loo yaqaan Aborigines ayaa maalintan waxa ay ugu yeeraan maalinta la qabsaday sababtoo ah dhulka ayaa lagu degey heshiis la’aan iyo fasax la’aan duqeyda leh dadka dega dhulkaas.
Miss Gillard R/wasaaraha Australia ayaan wax dhibaato ah soo gaarin iyadoo markii dambe la geeyey xarunta ay ka degentahay magaalada Canberra.
R/wasaaraha Australia Julia Gillard oo kabaheeda ka carartay